Wararka - Aqoonta mesh silig oo alxan ah
Mesh silig mesh welded waxaa lagu alxamay by silig bir ah, mesh steel steel steel.The godka mesh waa square.Sare daaweynta wajiga noqon kartaa koronto galvanized, kulul lagu rusheeyey galvanized iyo PCated coated.The anti-miridhku ugu wanaagsan waa PCV dahaarka leh silig shabaggeedii la shaabadeeyey. mesh silig welded, waxaa loo qaybin karaa galay duudduuban mesh silig welded iyo guddi mesh silig welded.
Mesh silig welded waxaa si ballaaran loo isticmaalaa in warshadaha, beeraha, taranka, dhismaha, gaadiidka, macdanta iyo dhinacyada kale. Sida mashiinada ku lifaaqan, xeryaha xoolaha, ubaxyada iyo geedaha ku lifaaqan, waardiyeyaasha daaqadaha, marinnada marinnada, baqashada digaagga, dambiilo ukunta iyo dambiilo cunto guriga iyo xafiiska, dambiilo waraaqo ah iyo qurxin
Tusaale ahaan, mesh silig alwaax leh oo dahaaran PVC ayaa inta badan loo isticmaalaa khaanadaha dukaamada waaweyn, qurxinta gudaha iyo dibada, beeraha digaaga, ubaxyada iyo geedaha deyrka, banaanka loo isticmaalo villa, go'doominta xayndaabka deegaanka, oo leh midabyo dhalaalaya, qurux badan oo deeqsinimo leh, ka hortagga daxalka, samee ma libdhi, faa'iidooyinka iska caabbinta ultraviolet, midab ikhtiyaari ah: cagaar madow, caws buluug, madow, guduud, jaalle iyo midabbo kale.
Tayada mesh alxanka korontada waxaa inta badan lagu ogaadaa dhexroorka siligga, cabirka banaanka iyo sida ay u adag tahay alxamidu.
1. Shuruudaha looxa kala-goysyada:
Marka horeba, barta alxamidu waa inay ahaato mid adag, ma yeelan karto alxamd daldalool ah, ifafaalaha alxanka oo sii daaya. Barta alxanka ma ahan mesh mesh alxanka korantada oo xoog leh, maaddaama birta guud ahaan la xoqay. laba mesh alxanka korantada 3mm, wadarta guud ee xarigga siligga laba-geesoodka ah waa 6mm. Ka dib markii alxanka, dhererka superposition ee barta alxanka double silig waa inuu u dhexeeyaa 4-5mm. Kaalinta alxanka waa mid aad u hooseeya alxanka ma aha mid adag, barta alxanka waa mesh aad u qoto dheer oo taageeraya awood daciif ah, fududahay in la jebiyo.
2. Xakamaynta qaladka dhexroor silig:
Khaladka dhexroorka siligga caadiga ahi waa gudaha ± 0.05mm. Markii aad iibsaneysid mesh silig alxan ah, si fudud ha u tixgelin sida qiimaha u hooseeyo, laakiin waxaad ku tiirsan tahay culeyska qayb kasta. Qaaciddada xisaabinta miisaanka ayaa loo isticmaali karaa in lagu go'aamiyo in khaladka dhexroorka siliggu uu ku jiro heer macquul ah.
3. Khalad macquul ah ee cabirka shaashadda:
Hadda soo saarista meshku waa alxamid mashiin weyn oo otomaatig ah, qaladku wuxuu ahaa mid aad u yar. Sababta oo ah isku dhaca birta inta lagu jiro alxanka, waxaa jiri doona ballaarin kuleyl ah iyo foosha qabow, iyo leexasho macquul ah ayaa la hubaa inay jirto. Guud ahaan, khaladka xagjirka ah wuxuu ku dhexjiraa ama lagaa jaray 5mm, qaladka cabirkiisuna wuxuu kujirayaa lagu daray ama lagajaray 2mm.